6 barnaamijyada cimilada ah si aysan cimiladu kaaga qabsan meel aad ka ilaaliso 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Yaan waligiis cimilada laga qabsanin markuu guriga ka baxayo dallad la'aan? Mise waxaad u baxday adoo u maleynaya inay qabow dhaceyso oo aad heshay qorraxda ugu weyn? Sababahan iyo kuwa kale awgood, haysashada barnaamij saadaalinta cimilada oo wanaagsan ayaa muhiim ah in laga fogaado dhacdooyin kale oo lama filaan ah. Ka dib oo dhan, cimiladu waxay u jirtaa inay na caawiso.
Maanta waxaa jira daraasiin codsiyo saadaalin cimilo ah si looga fogaado daqiiqado ceeb ah, sida in shaqada lagu qoyo ama aan qoraxdu qorraxdu dhicin maalinta jimicsiga ee beerta. Taasi waa sababta SeoGranada ay ugu sameysay liiskan kan maanta ugu fiican. Baadhid:
AccuWeather waa mid ka mid ah barnaamijyada cimilada ugu caansan. Sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu saxsan, oo bixiya macluumaadka waqtiga-dhabta ah ee cimilada, oo leh dhowr astaamo qabow.
Teknolojiyada ay adeegsato AccuWeather waxay xaqiijineysaa mid ka mid ah saadaasha hawada ee ugu kalsoonida badan ee la heli karo maanta. Duufaannada iyo / ama isbeddelada lama filaanka ah ee cimilada ayaa looga digayaa digniino sax ah, sidaa darteed qofna kuma dhici karo inuu iska ilaaliyo dhacdada lama filaan ah ee cimilada.
Marka lagu daro suurtogalnimada in la arko saadaasha maanta ama laba toddobaad kadib, AccuWeather waxay bixisaa macluumaad ku saabsan dabaysha, huurka hawada iyo qabowga dabaysha.
Si aad u soo dejiso AccuWeather, xulo nidaamka qalliinka: Android / iOS.
Codsiyada xiddigiska si loo sahamiyo Caalamka waqtiga dhabta ah
Climatempo waxaad kula socon kartaa cimilada meelkasta. Waxaad ku hubin kartaa waqtiga dhabta ah, marka lagu daro inaad haysato xog saacadle ah, maalinle ah ama maalinta xigta ah.
Si wax walbo looga dhigo xitaa mid soo jiidasho leh, waxaa suurtagal ah in la helo warar la xiriira cimilada oo laga feejignaado waxa adduunka ka dhacaya. Waan ka helay Widget codsiga, si fudud u xulo nooca nuxurka oo si toos ah uga hel guriga ama shaashadda qufulka.
Codsiga waxaa ku jira macluumaad ku saabsan xawaaraha dabaysha, aragtida, cadaadiska jawiga, qorax soo baxa iyo waqtiyada qorax dhaca, huurka hawada, iyo kuwo kale. Weli barnaamijku wuxuu dabagal ku hayaa duufaannada.
Si aad u soo dejiso Climatempo, xulo nidaamka qalliinka: Android / iOS.
Mid ka mid ah codsiyada ugu isticmaalka badan marka laga hadlayo cimilada, Yahoo Weather waxay leedahay naqshad dareen leh oo raaxo leh, oo keeneysa dhowr sawir oo la jaan qaadaya goobta, waqtiga iyo xaaladaha cimilada.
Macluumaadka waxaa lagu soo bandhigayaa warbixinno dhameystiran oo faahfaahsan, iyadoo dulmar guud laga sameynayo cimilada illaa 10-ka maalmood ee soo socda. Khariidadda is-dhexgalka, waxaad ka ogaan kartaa heerkulka meelo kala duwan iyo jihada iyo xawaaraha dabaysha.
Digniinta cimilada xun waxay kaa caawineysaa inaad si fiican u qorsheyso maalintaada, iyo sidoo kale animations xiiso leh oo bixiya macluumaad sida qorrax soo baxa iyo qorrax dhaca iyo cadaadiska jawiga. Dhacdooyinka falaadhaha ultraviolet (UV) ayaa sidoo kale la heli karaa, iyo sidoo kale huurka hawada.
Si aad u soo dejiso Yahoo Tempo, xulo nidaamka qalliinka: Android / iOS.
4. Cimilo iyo radar
Saadaalinta cimilada degdega ah, ee leh Clima & Radar waxaad uga hortagi kartaa heerkulka 24 saac ee soo socda ama 14 maalmood laga bilaabo hadda. Dheeraad ah, dabcan, daraasiin xog kale ah si ay wax walba ugu socdaan sidii loogu talagalay, iyadoon qatar loo gelin roobka maalintaas baaba'aya jardiinka!
Weli waa suurtagal in la xaqiijiyo xawaaraha dabaysha, aragtida, suurtagalnimada roobka, qorrax soo baxa iyo waqtiyada qorrax dhaca, dareenka kuleylka, iyo macluumaad kale oo badan. Si aad u hesho xog sax ah, waxaad ku dari kartaa goobta saxda ah ee arjiga.
Si aad u soo dejiso Cimilada & Radar, dooro nidaamka hawlgalka: Android / iOS.
5. Waqtiga Brazil
Mid ka mid ah qodobada ugu xiisaha badan ee Tempo Brasil waa suurtagalnimada in la helo animations macquul ah oo u oggolaanaya in si dhakhso leh loogu arko isbeddelada cimilada. Iyadoo la cusbooneysiinayo joogto ah, dhammaan macluumaadka si fudud ayaa looga helaa is-dhexgalka dareenka leh.
Waad hubin kartaa cimilada ilaa 10 maalmood kahor. Dhammaan warbixin faahfaahsan, oo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan roobka, dabaysha, shucaaca ultraviolet, cadaadiska jawiga, iyo xog kale oo badan.
Waxaa loogu talagalay taleefannada gacanta iyo kiniiniyada, Tempo Brasil waxaad marin u heli kartaa khariidado is-dhexgal ah, taas oo sahlaysa in la helo goobta saxda ah ee goobta loogu talagalay dhacdo ama dalxiis. Ku habboon qof kasta oo doonaya codsi fudud laakiin waxtar leh.
Si aad u soo dejiso Tempo Brasil, xulo nidaamka qalliinka: Android / iOS.
6. Saadaasha hawada
Codsigan, waxaad kuheysaa macluumaad waqtiga dhabta ah, inaad awoodid inaad kala tashato saadaasha hawada ficil ahaan adduunka oo dhan. Laga soo bilaabo Rio de Janeiro ilaa London, laga bilaabo New York ilaa Tokyo, waxaad la jaanqaadaysaa isbeddelada cimilada ugu yar waxaadna isu diyaarineysaa maalin aan lahayn dhacdooyin lama filaan ah.
Marka lagu daro xogta heerkulka, Saadaasha Cimilada waxay soo bandhigeysaa macluumaad ku jira warbixin dhameystiran, labada darajo Celsius iyo Fahrenheit. Waxaad ka heli kartaa cadaadiska jawiga, aragtida, huurka hawada, roobka meelo kala duwan khariidadaha is-dhexgalka, xawaaraha dabaysha iyo jihada, iyo inbadan oo dheeri ah.
Maya Widget waxaa jira macluumaad cusbooneysiin ah marwalba, oo awood u yeelan kara la tashiga cimilada maalmaha ama toddobaadyada soo socda.
Si aad u soo dejiso saadaasha hawada, guji halkan.
Iyadoo la adeegsanayo barnaamijyada kor ku xusan, waxaa jira macluumaad buuxa oo ku saabsan cimilada iyo isbedelo lama filaan ah oo lama filaan ah oo burburin kara qorshooyinka maalin la yaab leh. Ka feejignow roobka si aanad uga gaabsan!
Hadda oo aad hayso waxoogaa macluumaad ah oo ku saabsan inaadan shaqadaada ku qoynin, sidee ku saabsan inaad ogtahay 10 barnaamijyada tirinta iyo la soco inta waqtiga ka hartay arooska ama safarkaas cajiibka ah?
Si kor loogu qaado dareenka, waxaan sidoo kale muujineynaa codsiyada 8 weedho si aan kuugu dhiirrigeliyo maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, haddii roobku da'ayo oo aad u socoto shaqo ama jaamacad, waxaan haynaa 10 codsi oo aan ku aqrin karno buugaag ku jira taleefankaaga gacanta oo aan ugu raaxaysanno xilliyadaha xiisaha leh ee wax lagu barto ama lagu raaxeysto.